Dama Mahaleo : « Tsy hisy aloha ny fampisehoana » -
AccueilVaovao SamihafaDama Mahaleo : « Tsy hisy aloha ny fampisehoana »
Dama Mahaleo : « Tsy hisy aloha ny fampisehoana »
20/08/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Iray amin’ireo kandida. Mpanakanto no nahafantarana an’i Dama hatramin’izay, ary iray amin’ireo andrin’ny tarika Mahaleo. Noho io safidy noraisiny io, na tsy nilazana izany mivantana aza ity, dia tsy hisy intsony aloha ny fampisehoana iarahana amin’ny tarika Mahaleo. Resadresaka
Triatra : Raha lany ianao, ahoana ny ho avin’ny tarika Mahaleo ?
Dama : Raha lany aho ? Ny tarika Mahaleo efa nitso-drano ahy. Iny Dama omeko anareo hoy i Bekoto fa avereno tsara izy rehefa avy eo.
–	Izany hoe ?
•	Izany hoe, mazava ho azy fa efa nahazo tso-drano aho izany hamita ity adidy masina ity satria ny fampitan-kafatra hatramin’izay no avadika ho fampivoarana ny firenena amin’izay izao. Amiko ny tarika Mahaleo no lakana. Tsy mitsipa-doha lakana nitana aho fa raha tsy nisy tarika Mahaleo tsy nisy aho. Tsy ariako na ajanona ny tarika Mahaleo. Io no lasitra namolavola ahy. Tsy hohadinoiko io.
–	Rehefa mipetraka ve ny Filoha Dama, tsy hisy intsony ny fampisehoan’ny tarika Mahaleo ?
•	Ny zavatra maha-maika aloha izao, izahay anie efa 46 taona nampirevy e ! Tsy hoe ajanona fa aleo avadika amin’izay ireny nofinofy sy fanontaniana be dia be ireny mba hampiharina amin’izay. Ny mahatonga ny tarika Mahaleo nandeha anie dia vokatr’ ilay hoe marary anaty e ! Dia mbola hotohizina ihany ve ilay marary anaty e? Mijanona amin’ilay hoe mampalahelo dia mihira. Fotoana izao mba ahafahana mampiseho fa misy ny malagasy mbola mijoro, mbola manan-katolotra. Fa tsy hoe olona atao ho vidiam-bola foana isika. Izay no mahatonga ny valim-babena. Hafatra ao anatin’ny hira anie izany e ! « Raha mila fanampiana ianao ». Tsy mitady tambiny.
Mankasitraka ny ezaka vitan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina avokoa ireo mpikambana eo anivon’ny vovonana mivoy ny firaisankina ho amin’ny fampandrosoana ny tanindrazana na ny FFT izay nijoro tao anatin’ny iray volana izao. Ahitana ireo antoko toa ...Tohiny
Foiben-toeran’ny HVM Antanimena : Lasibatry ny fampihorohoroana
Fonjan’Antanimora : Miisa 3500 ireo voafonja